Manao ahoana ny sosialy B2B? | Martech Zone
Manao ahoana ny sosialy B2B?
Talata, Oktobra 30, 2012 Douglas Karr
Nanontany fotsiny izahay, Fa maninona no tsy eo amin'ny fiaraha-monina ny varotrao? ka ity infografika ity dia tsy afaka natolotra fotoana tsara kokoa! 61% amin'ireo mpivarotra amerikana no mampiasa haino aman-jery sosialy mba hampitomboana ny fitarihan'izy ireo. Ahoana ny sosialy B2B dia infographic avy amin'ny InsideView izay manome statistika marim-pototra ary ohatra tsara sasantsasany amin'ny fomba fampiasan'ny orinasa haino aman-jery sosialy mba hampitomboana ny varotra sy ny vokatra amin'ny varotra. Fitarihana bebe kokoa ary fanidiana haingana kokoa… mila antony bebe kokoa ve ianao?
Efa nilaza zato heny izahay… saingy efa eo am-pikarohana ny vokatrao sy ny serivisinao ny vinavinanao. Ny fanontaniana dia hoe maninona no tsy eo ianao?
Tags: b2bhaino aman-jery sosialy b2btaratrafmFanamafisana ny varotrahaino aman-jery sosialy
Karazana paositra ampiasain'ny sokajy manokana
Marketing amin'ny votoatin'ny marketing amin'ny atiny
31 Oktobra 2012 à 5:36
Misaotra an'ity infografika ity indray. Tsy diso anjara mihitsy ianao tamin'ny fandrakofana lohahevitra mahafinaritra toy izany mba halefa isaky ny mandeha. Tiako ny fomba nanehoanao karazana fomba fiasa B2B ho an'ny media sosialy saingy fanontaniana iray fotsiny, miasa ve izany raha mbola vao manomboka ianao? sa tsy maintsy manangana ny lazanao amin'ny Internet aloha ianao?
31 Oktobra 2012 à 11:55
@Hezi Mino aho fa ny fanombohana dia mety hisy fiantraikany lehibe indrindra satria misy faniriana tsy mampino hahita vokatra, serivisy ary fampiharana vaovao amin'ny Internet. Mila fotoana sy tanjaka tokoa ny fananganana an'io fahatokisana sy fahefana io!
30 Novambra 2012 à 4:49
Mihabetsaka ny orinasa manomboka mampiasa ny tranokala hitondra fiara bebe kokoa
fifamoivoizana mankany amin'ny pejin'ny orinasany ary miaraka amin'ny Twitter, anisan'ny be indrindra izany
fomba malaza amin'ny fampiasana media sosialy amin'ny varotra.